Nezvedu - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Shanghai Yangli fanicha yezvinhu Co., Ltd.
Iwe unozonzwa pakarepo basa redu rehunyanzvi uye rekuteerera.
Kuomerera kune bhizinesi uzivi hwekuvimbika uye kubata vanhu zvakaenzana, GERISS yakazvipira kupa vatengi nemhando yepamusoro masevhisi.
Tinokugamuchirai kuti mushanyire kambani yedu, fekitori uye imba yedu yekuratidzira yakaratidza zvigadzirwa zvakasiyana izvo zvinosangana nezvamuri kutarisira.
Kana iwe uine zvinodiwa kune chero zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu izvozvi. Tiri kutarisira kunzwa kubva kwauri munguva pfupi.
Yedu kambani SHANGHAI YANGLI FURNITURE ZVINOKOSHA CO., LTD yakavambwa muna 1999, inotarisana nemidziyo yemidziyo yemidziyo kuvandudza uye kugadzira. Isu parizvino tinoshanda maviri maR & D nzvimbo uye mamiriro ehunyanzvi hwekugadzira zvigadziko muShanghai neFoshan, dunhu reGuangdong. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi pemhando mbiri dzinozivikanwa:YANGLI, GERISS, HIFEEL. Iwo Dhirowa System, Akavanzwa masiraidhi, Bhora rinotakura masiraidhi, Tafura masiraidhi, Yakavanzwa hinji, mabato, hini mahinji uye mimwe midziyo yemidziyo yemidziyo, ayo anoshandiswa mufenicha, makabati, mudziyo wemumba uye nhare. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira pakati penyika dzinopfuura makumi mana pasirese.
Yedu bhizinesi uzivi hwakavakirwa pamisimboti ye "Round Sky uye Square Earth, Kurwira uye Kudzidza", chinyakare chiChinese chirevo. Vashandi vedu vakagara nhaka uye vanorarama nemutemo uyu kuti hapana chingaitwe pasina zvirevo kana zviyero, uye bhizinesi redu rinofanirwa kutevedzera mirau nemirau mukuita kwedu kwemazuva ese. Isu tinokurudzira zvakasimba kuvandudza kunogara kuripo uye kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvedu nemaitiro nekusimbisa pane zvebhizinesi maitiro.
Mushure mekuyedza kwedu kwese kwemidziyo yemidziyo, kusanganisira dhirowa slide, makabati hinji, hinji hinji, mubato nezvimwe zvinokosheswa, takawana mukurumbira pakati pemakabati eAmerica, fenicha yakasimba, mudziyo wemumba uye mimwe minda.